SADC : nihemotra Alahady indray ny fanam-pahankevitra – MyDago.com aime Madagascar
SADC : nihemotra Alahady indray ny fanam-pahankevitra
Mitopy eto Eto Sandton, eto Afrika Atsimo ny mason’ny mpanara-baovao manomboka izao.Fantatra fa efa tonga eto avokoa ireo Filohampirenena mpikambana ao amin’ny SADC miisa telo ambin’ny folo, handinika mahakasika ny raharahan’i Madagasikara.
Araka ny vaovao voaangonay avy aty an-toerana anefa dia hihemotra rahampitso Alahady indray ny fanampahan-kevitra noho ny fisian’ny fandevenana anio Sabotsy an’ilay mpitari-tolona ANC vehivavy Albertina Sissulu, izay nanaovan’ny fitondrana Afrikanina Tatsimo fisaonana nasionaly.
Eto amin’ity toerana hita amin’ny sary ity no hanatanterahana izany fihaonana izany.
Izahay eto amin’ny mydago.com dia hampita vaovao, mivantana, avy aty Sandton araka ny fivoaran’ny toe-draharaha.
Sary : Magro Alahady 01 Mey 2011
Auteur Solo Razafy*Publié le 11 juin 2011 11 juin 2011 Catégories Politique
1 pensée sur “SADC : nihemotra Alahady indray ny fanam-pahankevitra”
Dia misaotra mialoha ê !
Précédent Article précédent : Itw Fetison Rakoto Andrianirina, 10 June 2011
Suivant Article suivant : Nihaona tamin’ireo delegasiona ny filoha Ravalomanana